Pacific-AA Online Shop | Pacivite G Detail
UOM: Box of 6x5's box
5,620 Kyats 5,339 Kyats
" ကျန်းမာသွက်လက် ထက်မြက်သူတိုင်း သုံးစွဲကြသည် ပက်စီဗိုက် ဂျီ "
လူကြီးလူငယ်အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဂျင်ဆင်းအားဆေး ပက်ဆီဗိုက်-ဂျီ သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပြီး စွမ်းအား များကို အချိန်တိုအတွင်း ပြည့်ဝစေသော ကိုရီးယားဂျင်ဆင်း ၊ သွေးအားကောင်းစေသော ဗီတာမင် B12 ဗီတာမင် E နှင့် Ferrous fumerate ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိမ်းညှိပေးပြီး အိုမင်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော Aloe extract အပြင် သွေးတွင်း မကောင်းသော အဆီများကို ကျဆင်းစေသော Lacithin တို့ပါဝင်သည် ။
Pacivite G ကို အားနည်းသူများ ၊ အစားအသောက်ပျက်သူများ ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်သူများ နှင့်စွမ်းအင်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းလိုသူများ အပြင် နလန်ထစ လူမမာများလည်းသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
တစ်ခါသောက်ဆေးတောင့်တစ်တောင့်နေ့စဉ်သောက်ရန် ( သို့မဟုတ် ) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသောက်ရန်။
Pacivite-G Promotion!!! ==================== တန်ပြီးရင်းတန်တဲ့ Pacivite-G Sales Promotion လေးလာပြီ။ May လ (၂၆) ရက်မှ July လ (၉) ရက်အထိ Pacivite-G ဝယ်ယူမယ်ဆို တစ်ဘူး 5% Off နဲ.ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
Korean Ginseng extr 40 mg
Aloe extr (BP)5mg
Lecithin (USP) 50 mg
Retinol Acetate (Vitamin A1) (KP) 5000 I.U.
Ergocalciferol (Vitamin D2) (USP) 400 I. U.
Thiamine nitrate ( Vitamin B1) (USP) 2mg
Riboflavin (Vitamin B2) (USP)2mg
Pyridoxine hydrochloride ( Vitamin B6) (USP)2mg
Ascorbic acid (Vitamin C ) (USP) 60 mg
Nicotinamide ( Vitamin B12) ( USP) 20 mg
Calcium pantothenate ( Vitamin B5) ( USP) 15.3 mg
Cyanocobalamin ( Vitamin B12 ) ( USP )6μg
Ferrous Fumarate ( USP) 54.76 mg
Copper sulfate (BP) 7.86 mg
Magnesium oxide ( USP ) 66.34 mg
Zinc oxide ( USP ) 5.0 mg
Dibasic calcium phosphate ( USP ) 307.5 mg
Maganese sulfate ( USP) 3.0 mg
Potassium sulfate ( KP ) 18.0mg
Tocopherol Acetate (Vitamin E) (BP) 45mg
အလင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မထိသောနေရာတွင်ထားပါ ။ လေလုံသော ဘူးနှင့်သိမ်းပြီး အခန်းအပူချိန်တွင်ထားပါ ။
၁ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များဖြစ်ပါက ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ဟု သံသယရှိပါက သတ်မှတ်ဆေးညွှန်းထက်ပိုမသောက်ရ ။ ဗီတာမင် အေ ( တစ်နေ့ 8,000 IU ) ထက်ပိုသောက်ပါက သန္ဓေသားအား ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည် ။
၂ ။ အောက်ပါအခြေအနေများဖြစ်ပါက အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ရမည် ။
• အသက် (၁) နှစ်အောက်ကလေး
• ဆရာဝန်၏ကုသမှုခံနေရသော လူနာများ
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် (သို့မဟုတ် ) ကိုယ်ဝန်ဆောင်မည့်သူ
၃ ။ သတိထားရမည့်အချက်များ
• သတ်မှတ်ထားသည့် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်အတိုင်းသောက်သုံးရမည် ။
• ကလေးငယ်များတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ အုပ်ထိမ်းသူ၏ ညွှန်ကြားမှုဖြင့်သာ အသုံးပြုရမည် ။
• ဗီတာမင် အေသည် နေ့စဉ် အစားအစာများတွင် လုံလောက်စွာ ပါဝင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် တစ်နေ့လျှင် ဗီတာမင်အေ 8,000 IU ထက်မပိုသင့်ပါ ။
၄ ။ အခြား သတိထားရမည့်အချက်များ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
• ပက်စီဗိုက် ဂျီ ကိုသောက်ပြီး ပျို့ခြင်း ၊ အန်ခြင်း ၊ ဝမ်းလျောခြင်း ၊ ယားယံအတွက်ထခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါက ဆေးသောက်ခြင်းအား ရပ်ပြီး ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ပြသပါ ။
• ပက်စီဗိုက် ဂျီကို သောက်ပြီး ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာခြင်း ၊ ဝမ်းသွားခြင်း ၊ ယားယံအတွက်ထခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါက ဆေးသောက်ခြင်းအား ရပ်ပြီး ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ပြသပါ ။
• ပက်စီဗိုက် ဂျီကို ဆးသောက်ခြင်းအားဖြင့် ရာသီသွေးဆင်းများခြင်း နှင့် ရာသီသွေးဆင်းမမှန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည် ။ အကယ်၍ သွေးဆက်ဆင်းနေပါက ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်ပြသပါ ။
• ဆေးသောက်ပြီး (၁)လကြာပြီးနောက်တိုးတက်ထူးခြားမှုမရှိဟု ယူဆပါက ဆရာဝန် (သို့မဟုတ် ) ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ ။
၅ ။ ထားသို ကိုင်တွင်ရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ
• ဆေးများ၏အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဆေးမှားသောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အတွက် အခြားဆေးဘူးနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရ ။